Sida Si Fudud Loogu Helo Daraasadda Kanada ee Dibedda VISA, Baasaboor iyo Oggolaanshaha Degganaanshaha 2022
December 4, 2017 SAN
Sida Si Fudud Loogu Helo Daraasadda Kanada ee Dibadda VISA, Baasaboor iyo Oggolaansho Degenaansho
Waa inaad heshaa Visa ardayga Kanadiyaanka ah haddii aad qorsheyneyso inaad wax ku barato dibadda Kanada mooyee mararka qaarkood xaalado gaar ah oo barnaamijkaaga waxbarasho uusan ka dambeyn karin bilaha 6 ama kiisaska kale ee laga dhaafay ee aan hoos ku taxay.
Kahor intaadan waligaa ka bixin wadankaaga oo aad wadan kale u baahato, waxaad u baahan tahay baasaboor, ka hor intaadan u safrin Kanada adoo ah arday caalami ah, waxaa laga yaabaa inaad u baahato inaad soo bandhigto ardayda VISA ah iyo ka dib, sharci deganaansho.
Sida Si Fudud Loogu Helo Daraasad Canadian ah Dibedda VISA, Baasaboor iyo Oggolaansho Degenaansho
Diiwaanada, haddii aad ku dhacdo mid ka mid ah qaybaha hoose, uma baahnid arday VISA ah inuu wax ku barto Kanada;
Waxaad tahay qoys ama xubin ka tirsan wakiil ajnabi oo jooga Kanada, oo ay aqoonsan tahay Wasaaradda Arrimaha Dibadda, Ganacsiga iyo Horumarinta Kanada.
Waxaad iska qoreysaa barnaamij waxbarasho oo soconaya wax ka yar lix bilood
Waxaad xubin ka tahay xoogagga shisheeye ee ka tirsan Sharciga Xoogagga Booqashada
Waxaad tahay muwaadin dal kale ah, laakiin waxaad leedahay sharci Hindi ah oo ka diiwaangashan Kanada
Talaabooyinka lagu helo VISA-da Ardayda Kanada:
Fiisaha badanaa waa shaabad ku taal bogga baasaboorka taas oo u taagan heshiis ku saabsan shuruudaha soo gelitaanka u dhexeeya kan haysta iyo waddanka martigelinaya. intaad sugeysid helitaanka VISA-gaaga kadib marka ay qasab tahay in laguu ogolaado, waxaad heli kartaa sharci degenaansho.
Hoos waxaa ku qoran tallaabooyinka ku lug leh helitaanka Visa ardayga Kanada ah;
Codso oo ka hel warqad aqbalaad jaamacad Kanada ku taal
Ka codso khadka tooska ah fiisadaada ardayga Kanada ee khadka tooska ah Dhalashada iyo Socdaalka Kanada goobta.
Waxaad ubaahantahay inaad keento warqada aqbalida ee jaamacadaada sidoo kale waxaad soo bandhigeysaa cadeyntaada ilaha dhaqaale ee kugu filan si aad udhameyso barnaamijkaaga waxbarasho (cadeynta isqorista aqoonyahan halkan ayaa ka shaqeyn doonta)
Waxaad ubaahantahay inaadan haysan diiwaanada danbiyada oo aad siisid diiwaankaaga caafimaad si aad uhesho inaad caafimaad qabtid.
Caddaynta tijaabada Ingiriisiga (IELTS ama TOEFL) (In kasta oo aysan tani khasab ku ahayn fiisaha ardayda Kanada laakiin waxaad u baahan tahay inaad diyaar u ahaato sidoo kale, dugsigaagu wuu dalban karaa)
Waxay qaadan kartaa muddo 14 ilaa 90 maalmood ah si aad u hesho ruqsaddaada waxbarasho ee Kanadiya (VISA).
XIDHIIDHKA: HOOS KA EEG DALALKA YURUB EE UGU FUDUD SI AAD DIBADA UGU BARATO
Xaaladaha dhifka ah qaarkood, joogitaanka in ka badan saddex bilood waxay u baahan tahay inaad hesho oggolaasho joogitaan. U oggolow waqti ku filan si aad u hesho fiiso aad ugu safarto dibadda.
Waxay kuxirantahay wadankaada dhalashada, waxaad ubaahnaan kartaa inaad usbuucyo ama xitaa bilo u ogolaato safaaradaada ama qunsuliyadaada martida loo yahay inay ka shaqeyso dhamaan dukumiintiyada loo baahan yahay ”-isepstudyabroad.org
Dowlada Kanada waxay rajeyneysaa inaad ka tagi doontid Kanada markaad dhameyso waxbarashadaada mooyee inaad codsatid PR ama ruqsad shaqo.
Sida loo Dalbo Deganaanshaha Joogtada ah ee Kanada
Xeerka Canadian-ka waxaa caadi ahaan la soo siiyaa 5 sano laakiin xaaladaha qaarkood (gaar ahaan ardayda caalamiga ah) waxaa la soo saaraa muddo sannad ah.
Waxaa jira ilaa shan dariishad oo kala duwan oo aad ka heli karto ruqsadda degenaanshaha joogtada ah ee Kanada.
Iyada oo Gelitaanka Gawaarida Kanada
Iyadoo loo marayo Socdaalka Ganacsiga
Iyada oo loo marayo socdaalka heerka Qoyska
Barnaamijyada magacaabista gobolka iyo
Iyada oo loo marayo fasalka waayo-aragnimada Kanada.
Mid kasta oo ka mid ah nidaamka kugu habboon adiga ayaa leh nidaamyo codsi u gaar ah oo ku yaal websaydhka Canadian-ka waana inaad taas ka hor intaadan dalban
“Baasaboor sax ah ayaa looga baahan yahay inaad gasho oo aad ka baxdo gurigaaga iyo waddamada aad martida u tahay. Hadaad mid leedahay, hubi in aanu dhici doonin illaa lix bilood ka dib taariikhda dhammaadka barnaamijkaaga. Xaaladaha qaarkood tani waa shuruud. Haddii aadan haysan baasaboor, codso mid markiiba isla markaana weydii adeegga ugu dhaqsaha badan ee suurtogalka ah.
XIDHIIDHKA: SIDEE LOOGU BARAN KARAA SIYAAD BARNAAMIJKA DAL KASTA
Ogsoonow Baasaboorkaaga Ardayda Kanada
Hayso diiwaanka lambarkaaga baasaboorka oo samee laba nuqul oo ka mid ah bogga aqoonsiga oo ay la socdaan kaarar aqoonsi oo kale ama dokumentiyo muhiim ah. Mid dibadda u qaad halna meel aamin ah ku dhaaf guriga. Haysashada macluumaadkan waxay dedejineysaa beddelka baasaboorkaaga haddii ay dhacdo inuu lumo ama la xado.
Muwaadiniinta Mareykanka ah: arag Websaydhka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka macluumaad ku saabsan sida loo codsado baasaboor.
Waa inaad sidataa sawiro dheeri ah oo baasaaboor ah si aad ugu isticmaasho kaararka aqoonsiga, codsiyada fiisaha, ama diiwaangelinta jaamacadda. Meelaha qaarkood, sida Yurub, way fududahay in kuwaas laga helo mashiinnada lagu iibiyo sawirrada ee garoomada diyaaradaha ama saldhigyada tareennada.
Haddii aad weli su'aal ka qabtid mid ka mid ah arrimaha halkan lagu falanqeeyey, waad iska tuuri kartaa faalladaada adoo adeegsanaya sanduuqa faallooyinka ee hoos ku qoran waana hubaa inaan ka qayb geli doono.
XIDHIIDHKA: SIDEE LOOGU HELAA SCHOLARSHIP BILAASH AH OO AAD KU SOO BARATO DALKA
SIDA LOO CODSADOSIDA LOO GELOPassportOggolaanshaha DeganaanshahaKu Baro VISA DibeddaVISA
Previous Post:Xarumaha Imtixaanka TOEFL ee Galbeedka Afrika
Post Next:Tobanka Jaamacadood ee ugu Fiican Mareykanka Si Wax Loo Barto
Pingback: Liiska Kulliyadaha Kanada ee Ardayda Caalamiga ah - Top 15
Tamirat Huriso wuxuu leeyahay,
July 21, 2018 at 7: am 21
Magaca: Tamirat Huriso.
Heerka waxbarashada: Shahaadada Bachelor-ka ee injineernimada kiimikada
Xaaladda guurka: aan la qabin
Xirfadaha: Qoritaanka wanaagsan, akhriska iyo ka hadalka gudaha
Parterniship: Naadiga HIV AIDS